इंग्ल्याण्डमा दुई शतक बनाएका कोहलीको शीर्ष स्थान धरापमा ! - इंग्ल्याण्डमा दुई शतक बनाएका कोहलीको शीर्ष स्थान धरापमा !
इंग्ल्याण्डमा दुई शतक बनाएका कोहलीको शीर्ष स्थान धरापमा !
२०७५, २८ भदौ, 03:20:16 AM
एजेन्सी । इंग्ल्याण्डमा हालै सकिएको टेस्ट क्रिकेट श्रृंखलामा भारतका कप्तान विराट कोहलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । पाँच वटा टेस्ट क्रिकेटमा उनले दुई वटा शानदार शतक बनाए । झण्डै चार वटा जति अर्धशतक पनि हाने । तर भारतले ४-१ ले टेस्ट श्रृंखला गुमायो । तेश्रो टेस्ट बाहेक कुनै टेस्टमा पनि भारतले गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेन ।
तेश्रो टेस्टमा एक शतक र ९७ रनको अर्धशतक बनाएका कोहलीकै बलले भारतले खेल जितेको थियो । पहिलो टेस्टमा पनि उनले शानदार सतकसहित १ सय ४९ रन बनाएका थिए ।
तर टेस्ट क्रिकेटको नम्बर एक टिमले ४-१ ले श्रृंखला गुमाएपछि कोहलीको उत्कृष्ट प्रदर्शन छायामा परेको छ । यसको पुष्टि हालै अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको व्याट्सम्यानको बरियतामा भएको छ ।
कोहली अहिले पनि टेस्ट व्याट्सम्यानको शीर्ष स्थानमा छन । तर उनको प्रदर्शनको अंक भने घटेको छ । इंग्ल्याण्डविरुद्ध सर्वाधिक ५ सय ९३ रन बनाएका कोहलीले ५९ दशमलव ३० को औसतमा व्याटिंग गर्दा पनि ९३० अंक छ ।
उनीभन्दा पछि रहेका अष्ट्रेलियाका कप्तान स्टिभ स्मिथको ९ सय २९ अंक छ । अहिले प्रतिबन्धमा रहेका स्मिथभन्दा यसअघि २७ अंकले अघि रहेका कोहली अब भने एक अंकले मात्रै अगाडी छन ।
अब टेस्ट क्रिकेटमा उनले राम्रो प्रदर्शन नगरे कोहलीको शीर्ष पद गुम्नेछ । भारतले अब अब वेस्ट इण्डिजसँग खेल्नेछ । बलिंगतर्फ भने इंग्ल्याण्डका जेम्स एण्डरसन शीर्ष स्थानमा छन । टिममा भने भारत नै टेस्ट क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा कायमै छ ।